WhyNotWin11: App si loo xaqiijiyo haddii PC-gayagu ku habboon yahay Windows 11 | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aan nahay isticmaaleyaasha Nidaamka Howlgalka GNU / Linux leh hal ama in kabadan kombiyuutar oo ku jira qaabka sugida Duubista Labaad con Windows 7 ama Windows 10, ama sababtoo ah waxaan leenahay qoys, saaxiibo ama macaamiil kaliya Windows, Way fiicantahay in la ogaado barnaamijyada fududeyn kara shaqada hubinta kumbuyuutarrada ku habboon ama ku habboon, iyo sababta sababa, ee haajiraan cusub Windows 11.
Xaqiiqdi, Microsoft Wuxuu leeyahay aalad u gaar ah oo bilaash ah, laakiin gurigiisa mar walba ma fiicna. Iyo hadaan adeegsan karno qalab bilaash ah ama furan tan iyo shaqo kasta oo kale, on Windows, MacOS ama GNU / Linux si fiican xitaa ka sii fiican. Taasina waa si sax ah kiiska arjiga loo yaqaan "SababNotWin11".
Sida qaar badan oo jecel tikniyoolajiyada ay horeyba u ogaayeen, inbadan oo buun buunin ku saabsan Windows 11 waa inuu la sameeyaa dabeecadda khasabka ah ee kombuyuutarrada leh Tikniyoolajiyadda TPM. Tan iyo in ka badanba, waxaa muhiim ah in la isticmaalo codsiyada bixiya faahfaahin dheeraad ah, sida "SababNotWin11".
Sidaa darteed, kuwa doonaya inay sii xoojiyaan wax badan oo ku saabsan Tikniyoolajiyadda TPM waxaan isla markiiba kaaga tagi doonnaa hoosta, daabicitaankeenii hore ee la xiriiray mowduucan iyo kuwa kale ee la xiriira dib u eegista codsiyada la midka ah, taas oo ah, ee isha furan ee Windows:
"TPM (Module Platform Module) waa kumbuyuutar kumbuyuutar (microcontroller) oo si ammaan ah u kaydin kara farshaxannada loo adeegsado in lagu xaqiijiyo barxadda (kombuyutarkaaga ama laptop-kaaga). Farshaxanadan waxaa ka mid noqon kara furaha sirta ah, shahaadooyinka, ama furayaasha sirta." TPM: Wax yar oo ka mid ah wax walba oo ku saabsan Module Platform Trusted. Iyo isticmaalkiisa Linux!
MS PowerToys: Isha Furan ee Adeegga ee Windows 10 Users
ShareX: Furan Ilaha Abka ee Screenshot ee Windows
1 WhyNotWin11: Furan Source App
1.1 Waa maxay WhyNotWin11?
1.3 Macluumaad badan oo faa'iido leh
WhyNotWin11: Furan Source App
Waa maxay WhyNotWin11?
Sida laga soo xigtay Developer iyada Goobta rasmiga ah ee GitHub, "SababNotWin11" Waxaa si kooban loogu sharaxay sida soo socota:
"Waa qoraal ogaanshaha si loo caawiyo in la ogaado sababta PC-gaagu uusan diyaar ugu ahayn nooca Windows 11."
Taasi waa "SababNotWin11" waa agab furan oo softiweer ah (codsi) oo noo ogolaanaya inaan hubino bal in kumbuyuutarradeena (desktop-ka ama laptop-ka) socon karo Windows 11 iyo in kale. Iyada oo ay ku kala duwan yihiin, marka loo eego kuwa Qalabka Hubinta Caafimaadka Microsoft (Hubinta Caafimaadka PC), taasi waxay bixisaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sababta kumbuyuutarku u socon karo ama u socon karo Windows 11.
Tanna, waxay baareysaa qalabka oo way noo sheegaysaa sababta Windows 11 aan loo taageerin, oo na siinaya liiska dhammaan qalabka nidaamka meesha ay dhibaato ka jirto.
Ka mid ah qaababka ugu caansan ee "SababNotWin11", taas oo ka dhigaysa mid ka fiican Microsoft asalka ah, waxaan sheegi karnaa waxyaabaha soo socda:
Isdhexgalka Isticmaalaha Muuqaal Wanaagsan (GUI)
Hubi dhammaan shuruudaha u dhigma oo tus haddii kombiyuutarkaagu buuxiyo.
Ku muuji natiijooyinka midabbada. Ahaanshaha midabka cagaaran ee "haa", midabka cas ee "maya", iyo midabka huruudda ee "aan la hubin".
Hubinta ku habboonaanta qalabka ee dhammaan meelaha, oo ay ku jiraan nooca CPU, nooca TPM, qadarka RAM, iyo BIOS, iyo waxyaabo kale.
Nota: Marka kombiyuutar u hoggaansamo inta badan qalabka la jaan qaada Windows 11, waxay u badan tahay inay u oggolaato rakibidda isla wixii ku yaal. Si kastaba ha noqotee, "SababNotWin11" waxay ka caawin doontaa dad badan inay hagaajiso faahfaahinta qalabka la ogaado, oo aan la taageerin.
Macluumaad badan oo faa'iido leh
Si aad u soo dejiso, waxaad ka heli kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka oo soo dejiso rakibayaashii ugu dambeeyay ee deggan ee laga heli karo Qaabka ".exe". Wuxuu hadda u socdaa tiisa nambarka xasilloon ee 2.3.0.5, oo la sii daayay maalmo ka hor.
Marka rakibayaasha la soo dejiyo, aniga kiiska isticmaalka dhabta ah, kaliya socodsii barnaamijka oo sug intaad ku shubaneyso illaa dhammaan qiyamkaaga isku xirnaanta si buuxda loo cusbooneysiiyo.
Tani waxay ahayd natiijada isticmaalka "SababNotWin11" kumbuyuutarka. Taas oo si kooban, macquul ahaan aan ku habboonayn in loo haajiro Windows 11.
In kastoo, kiiskeyga qaaska ah aniga waxba iima aha aniga dhan, tan iyo 99% waqtigeyga kombuyuutarka waxaan si fiican ugu qaataa GNU / Linux, anigoo adeegsanaya oo horumarinaya tayda MX Linux 19 respin loo yaqaan Mucjisooyinka. Sidoo kale, kumbuyuutarkaygu wuxuu leeyahay waxqabad aad u sareeya oo dhinac walba leh GNU / Linux taas oo leh Windows 10.
Sidaas: "Windows 11 ma labisatid inaadan u socon".
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan tan xiisaha leh barnaamijka furan wac «WhyNotWin11», taas oo ujeedadeedu tahay fududee tijaabada qalabka iyo softiweerka kombuyuutarradeena si aan u ogaano inay ku habboon tahay iyo in kale oo aan lagu rakibin karin Windows 11; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » WhyNotWin11: App si loo xaqiijiyo haddii PC-gayagu ku habboon yahay Windows 11
Ultimaker Cura 4.10 horey ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa
GitHub Copilot, caawiye sirdoon macmal ah oo loogu talagalay qorista nambarka